Khuthaza uthando lokufunda ngale filimu imfutshane | Uncwadi lwangoku
Khuthaza uthando lokufunda ngale vidiyo imfutshane
Abazali nootitshala baqinisekile uxanduva lokuzalisekisa nabantwana bethu kunye nabafundi. Omnye wabo, ukuba sifuna abantwana bethu babe nomdla, babe namaxabiso, bakhethe ukuchitha ixesha labo simahla benencwadi elungileyo endaweni yekhonsoli yevidiyo (ndingomnye wabo bacinga ukuba yonke into ingadityaniswa) kwaye bafumane ngaphezulu iminyaka a isigama esityebileyo nesibanzi, kukubafundisa ukuba bafunde, okanye mandithi: zibethelele kuthi ukuthanda kwethu ukufunda.
Bendihlala ndikuthanda ukufunda, ndisemncinci kakhulu…. Ndiyakhumbula ukuba kuzo zonke iincwadi zesikolo ndandigcina ezimbini kuphela eyunivesithi (utshintsho, ngelishwa, lwazenza zanyamalala): olunye lwalululwimi (ndicinga ukuba ibanga lesithandathu lePrayimari) kwaye elinye iintsomi namabali, yoncamathelisi olomeleleyo, olwalukhapha le yangaphambili. Kwimeko yam, incasa yoncwadi kunye neencwadi ngokubanzi kunokuthiwa zizelwe, ukuba andikaze ndifune mntu "undityhalele" kulo. Nangona kunjalo, mhlawumbi kuba namhlanje abantwana Bayakhula ngezinye iindlela ezininzi okanye ngenxa yokungabikho kwexesha labazali. abafundanga kangangoko befanele. Yintoni esinokuyenza emva koko? Funda phambi kwaboThatha nje incwadi, uhlale ecaleni kwakhe, kwaye wenze umzekelo. Ayisiyonto yokunyanzelwa ukuba bafunde, Ngale ndlela siza kwenza kuphela ukuba abantwana bethu, abatshana, abazukulwana, bazithiye iincwadi kwaye babaleke kuzo.
Izolo ndibone a ifilimu emfutshane into endiyithandayo. KukuYouTube kwaye kunesihloko "Elona lifutshane kwihlabathi ukukhuthaza ukufunda". Imalunga nemizuzu eli-15 yevidiyo apho ngebali lokufunda inkanuko edluliswayo, olo thando lweencwadi. Sonke siyazi ukuba bathanda ntoni abantwana (kwaye abancinci kangako), ke le vidiyo inokuba yindlela elungileyo yokubakhuthaza ukuba bafunde.
Ndiyakukhuthaza ukuba uhlale nabantwana bakho, abafundi, abazala, abatshana okanye abazukulwana phambi kwecomputer kwaye ubazise ividiyo… Ngaba iyakusebenza? Uya kundixelela ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Khuthaza uthando lokufunda ngale vidiyo imfutshane
UQuevedo noGóngora bayaqhubeka nezabo kwi-Twitter